Somaliland ma reer baa iska leh mise reero ayaa wada leh? | Awdalpress.com	Qoraalo | Tacliiq Raaci | E-mail / Home
Somaliland ma reer baa iska leh mise reero ayaa wada leh?
Both comments and pings are currently closed.	Somaliland marka la sheegayo, waxa dad badani u kala fasirtaan siyaal kala geddisan, dalka iyo dadka loo jeedo ee lahaanshaheeda loo tiriyaana ay siyaal kala geddisan u dhigaan amma u kala mecnaystaan.
Haddaba, Fasalkeenna maanta waxa aan bal isku dayi doonnaa in aan isla garanno sida mawduucu sheegayo in Somaliland ay tahay buqcad ay reer uuni sheegtaan, halka ay dad kalena u haystaan in reero badani ay deggen yihiin.
Maamulka iyo siyaasiyiinta Somaliland ka dhex muuqdaa waxa ay dalka Somaliland u fasiraan in uu yahay gobolkii woqooyi ee Ingiriisku gumaysan jiray, 1960kiina ku biirtay Somaliyadii uu Talyaanigu gumaysan jiray. Laakiin 1991kii ay xorriyaddoodii la soo noqotay.
Mucaaridka Somalilandna waxa ay si cad uga soo horjeedaan doodda noocaasi ah, oo ay ku tilmaamaan mid riya ah. Oo aan Somaliya lagu kala goyn karin. Maamulka Somalilandna waxa ay ku tilmaamaan reer kaliya oo ah beesha dhexe. Balse waxa cad in maamulka ay ku jiraan dad beelaha kale ahi. Inkasta oo aanay awood iyo ragannimo badan ku dhex lahayn maamulkaasi.
Si kale haddii aan u dhigno, waxa cad in reeraha woqooyiga amma aan idhaahdee Somaliland deggeni, ay ku kala geddisan yihiin fekerka Somalilandnimada, waxana aan daah saarnayn in reerka beesha dhexe ay meel kasta oo ay joogaan ay u halgamaan sidii Somaliland ay dawlad u noqon lahayd amma ay muujiyaanba in ay iyagu yihiin muwaaddiniinta koowaad. Waxana ay ku doodaan in Somaliland dhiig loo soo daadshay, oo ay SNM u soo dagaallantay in ay Somaliland dhalato. Doodda noocaasi ahi maaha mid la qariyo, maaha mid lala dhuunto ee waa dood beesha dhexe sheekhooda, shariifkooda iyo siyaasigooduba si qaawan uga sheego fagaarayaasha.
Doodaha noocaasi ahina waxa ay aad u fogeeyaan shucuubta kale ee ay dal iyo dan wadaagta yihiin, oo u arka in dooddaasi tahay mid cunsuriyadi ka dhex dhan dhamayso. In badan oo Somalilandnimada u xaydanaydna waxa ay majaraha ka baxaan marka ay dhawaaqyadaa aad maqlaan.
Dhinac kale marka la eego qaabka ay dawladdu u dhisan tahay iyo dadka xisbiyada hoggaamiya ayaa ay ka muuqataa in aanay jirin foormulla lagu heshiiyey oo lagu saxo dheelli tirka beelaha. Tusaale ahaan beesha Samarroon oo dhacda galbeedka Somaliland ayaa saamiga ay dawladda ku leedahay ay ka yar tahay 10%, halka beelaha daarood ee bariguna ay 12% yihiin. Wasiirada culculus iyo mansabyada waaweyn waxa 100% saydaray beesha dhexe ee loo tiriyo lahaanshaha Somaliland ammaba iyagu isa siiya Somaliland.
Saxaafadda iyo hay’aadka sida kuwa doorashada amma caddaaladda ayaa laga ilaaliyaa beelaha darifyada. Safaaradaha iyo safiirrada wareega ayaa waxa had iyo jeer laga soo xushaa beesha dhexe iwm.
Markaa miyaan la odhan karin dheelliga noocaasi ah iyo caddaalad darrida ka jirta Somaliland ayaa fashishay Somaliland. Had iyo jeer marka duufaanno siyaasadeed yimaaddaanna waxa shaashada TVyada soo fadhiista shakhsiyaad isku beel ah. Dadka kalena waxa uun loo haystaa markhaati.
Tusaale ahaan eeg dhacdadii ugu dambaysey ee gil gishay Somaliland, gudo iyo dibadba dadka xiiqsani waa beesha dhexe, kuwa u haysta in ay wax ka xumaanayaan waa beesha dhexe. Inkasta oo ay dad caqli lihi ku jiraan oo sidaasi ka soo horjeeda, haddana arki maysid dad ka soo jeeda beesha dhexe oo isku dayaya in ay wax saxaan. Halka beelaha darifyadu aanay wadhaaba hayn oo aanay xammaasad Somalilandnimi ahi eryeyba, xataa haddii shakhsiyaad isku diyaan in ay Somalilandnimada difaacaan waxa ka hor imanaya gidaar aanu dhaafi karin.
This post has been viewed 1145 times.	Categories: Daily Somali News